Zyro: Gadzira Yako Saiti Zvirinyore Kana Chitoro Chepamhepo NeIyi Inodhura Platform | Martech Zone
Kuwanikwa kwemapuratifomu ekushambadzira anodhura kunoramba kuchifadza, uye masisitimu ekutonga zvemukati (CMS) hazvina kusiyana. Ndakashanda mune akati wandei, akavhurika-sosi, uye ndakabhadhara CMS mapuratifomu mumakore… zvimwe zvinoshamisa uye zvimwe zvakaoma. Kusvikira ndadzidza izvo zvinangwa zvevatengi, zviwanikwa, uye maitiro, ini handiite kurudziro papuratifomu yekushandisa.
Kana iwe uri bhizinesi diki risingakwanise kudonhedza makumi ezviuru zvemadhora pawebhu, iwe unonyanya kushandisa mapuratifomu akareruka asingade kukodha uye kuve nesarudzo huru yematemplate kuti ugadzirise wega.
Pandakagadzira a spa nzvimbo gore rapfuura, ndakashandisa chikuva chandaiziva kuti chaizopa rubatsiro uye zvekutonga maturusi aidiwa nemutengi wangu. Pakanga pasina nzira yekuti ndaizovaka saiti yaida kugara ichigadziriswa, kugadzirisa, uye kuenderera mberi nekugadzirisa… sezvo muridzi aisakwanisa kubhadhara iyo nhanho yekuedza.
Zyro: Vaka Webhusaiti, Online Store, kana Portfolio
Imwe inoshamisa inokwanisika mhinduro ndeye zyro. Zyro ine zvese-inosanganisirwa mitengo uye isina-njodzi, 30-mazuva-yemazuva-yekudzoserwa mari garandi. Iwe unotowana 24/7 live chat rutsigiro nehurongwa hwese!
nemitambo -Hapana chikonzero chekuenda kunotora mupi wekutambira, Zyro's platform inosanganisirwa. Iwe unogona kutotora yako domain kuburikidza nesevhisi yavo yemahara nemamwe mapakeji.
Templates - Yese matemplate eZyro akagadziridzwa uye anoteerera nhare. Tanga ne template isina chinhu, kana sarudza kubva kuchitoro templates, bhizinesi sevhisi templates, mafoto matemplate, resitorendi templates, portfolio templates, resume templates, chiitiko templates, landing peji templates kana blog templates.
Dhonza-uye-Kudonhedza Mharidzo -Hapana kodhi inodiwa, iwe une yakazara yekugadzira kutonga neyakagadzirwa-akagadzirwa matemplate anogona kugadziridzwa kune yako brand uye kutumira mameseji.
Tsvaga Engine Optimization - Zyro's zvemukati manejimendi chikuva chine ese maficha zvinodikanwa kukwirisa saiti yako kana chitoro chekutsvaga injini.
AI Munyori - Kwete munyori mukuru? Simply haugone kuwana nguva yekunyora? Rega AI Munyori agadzire mameseji ewebhusaiti yako iwe uchiivaka.
Ecommerce -Iyo yakazara ecommerce package, inosanganisira mubhadharo kugadzirisa, kutumira kusanganisa, mutengi hukama maneja (CRM), otomatiki maemail, uye kushuma. Chitoro chako chinogona kubatanidzwa nyore nyore kuAmazon, Facebook, uye Instagram.
chibatiso -Masaiti akachengetedzwa zvizere neSSL yako chitupa uye HTTPS encryption, uye ecommerce transaction inodzivirirwa zvakare.
Deep Reporting - Tsvaga kunobva traffic uye wedzera shanduko yako nemidziyo yakaita seGoogle Analytics, Kliken, uye MoneyData.
Zyro ine akati wandei zvirongwa zvinokwanisika pasina mari yakavanzika.
Zyro ine Black Friday inopa iyo inotanga kubva Mbudzi 15th kusvika Zvita 7th… shandisa kodhi ZYROBF uye chengetedza kusvika ku86%!
Edza Zyro Yemahara!
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we zyro uye ndiri kushandisa yangu yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: amazon storecmszvemukati manejimendi systemzviite iwe-pachakoinotongwadhonza-uye-donhedza mupepetiecommerceecommerce optimizationecommerce chikuvafcommerceinstagram commerceInventoryInventory utariripaIndaneti chitoroonline chitoro anovakaonline store platformonline muvaki webhusaitioptimizationportfolio saitiseokutumira mabasazvekutengeseranawebhusaiti templateszyro